यसरी आफै जाच्न सकिन्छ स्तन क्यान्सर - Samata Khabar
यसरी आफै जाच्न सकिन्छ स्तन क्यान्सर
डा. राजेन्द्र बराल
१० माघ २०७४, बुधबार ०६:५६
सुरुमै पत्ता लगाएर उपचार गरे स्तन क्यान्सर पूर्ण रुपमा निको पार्न सकिन्छ । तर उपचार गर्नका लागि स्तन क्यान्सरलाई सुरुकै अवस्थामा फेला पार्न सक्नु पर्छ । सुरुको अवस्थामा फेला पार्न स्तनमा भएको गिर्खालाई सुरुमै थाहा पाउन सक्नु पर्छ । गिर्खा जति सानो भयो उपचारको परिणाम राम्रो हुने संभावना हुन्छ । हरेक महिलाले स्वयं घरमै बसेर सजिलै आफ्नो स्तनको जाच गर्न सक्छन ।
१. ऐना अगाडि उभिएर
क) ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो दुबै स्तनलाई हेर्ने । दुबै स्तनको समानता, आकार, बनौट, मुन्टोको अवस्था, छालाको रंग, रमपनाको फरकपन र स्तनको कुनै पनि भागमा रहेको गिर्खालाई ध्यानदिएर हेर्ने ।
(ख) ऐना अगाडि उभिएर दुबै हात माथि उठाएर काखीमा देखापरेको केही परिवर्तनलाई ऐना अगाडि उभिएर हेर्ने ।
(ग) दुबै हातले कम्मरमा हलका थिचेर ऐना अगाडि हेर्ने । यसो गर्नाले स्तनमा लुकेर बसेका केही परिवर्तन जmन प्रष्ठ भएर आउ सक्छन ।
(क) देबे्र काखीको मुनी एउटा तकिया राख्ने र देब्रे हातलाई टाउको पछाडि राखेर सुत्ने । दाहिने हातको बिचमा तिनवटा औलाको माथिल्लो एक तिहाई भागले देब्रे स्तनलाई छामेर जाँच गर्ने । यसरी छाम्ने क्रममा घडी घुम्ने तरिकाको उल्टो वा सुल्टो दिशामा क्रमबद रुपमा स्तनको सबै भागको जाच गर्ने
( ख) दाहिने काखीको मुनी तकिया राखेर देब्रे हातले दाहिने स्तनको माथिकै प्रकृया अनुसार जाँंच गर्ने । अन्त्यमा स्तनको मुन्टोलाई पालैपालो गरि बुढी औला र चोर औलाको बीचमा राखेर निचार्ने । स्तनको मुन्टोबाट केही रगत वा फोहोर पदार्थ आउछ वा आउदैन हेर्ने ।
(ग) स्तनको पाँंच भाग मध्ये प्रत्योक भागको क्रमबद रुपमा छामेर जाँंच गर्ने ।
नुहाँंउदा पनि सरलताका साथ जाँंच गर्न सकिन्छ । साबुन लगाएको हातले भिजेको स्तनको जाँंच गर्न सजिलो हुन्छ । देब्रे हातले दाहिने स्तन तथा दाहिने हातले देब्रे स्तनको क्रमवद रुपमा जाच गर्न सकिन्छ । हेल्थटुडेनेपालबाट
प्रकाशित १० माघ २०७४, बुधबार